ဒုက္ခရောက်နေလို့ ..ပိုက်ဆံပို့ ပေးပါ..။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Contributor, Columnist » ဒုက္ခရောက်နေလို့ ..ပိုက်ဆံပို့ ပေးပါ..။
ဒုက္ခရောက်နေလို့ ..ပိုက်ဆံပို့ ပေးပါ..။
Posted by kai on Jan 17, 2011 in Contributor, Columnist, Money & Finance, News, Opinions & Discussion |4comments
ဒုက္ခရောက်နေလို့ ..ပိုက်ဆံပို့ ပေးပါ..ဆိုတဲ့အဓိပါယ်ပေါက်တဲ့ အီးမေးလ် အခုတင်ဝင်လာပါတယ်..။
ရဖူးတာလည်း ခု၁-၂နှစ်တင် ၃-၄စောင်..အလိမ်ခံရတာကြားတာလည်း ၂ခါဆိုတော့…ဒါကလုပ်ကြံ-လန်ကြုတ်ဇတ်လမ်းဆိုတာသိသမို့ ..ချက်ချင်းကို တင်ပေးလိုက်တာပါ..။
အခုအီးမေးလ်မျိုးကို ..အများအားဖြင့် ကိုယ့်အီးမေးလ်ပတ်စ်ဝပ် ..အခိုးခံရပြီးမှ .. သူခိုးတွေက..အကောင့်ထဲကအီးမေးလ်တွေဆီပို့ တတ်တာမို့ .. နောက်အီးမေလ်းတခုထပ်မရှိရင် ကာယကံရှင်အီးမေးလ်ခိုးခံရသူခမျာ တော်တော်ဒုက္ခရောက်ပါတယ်..။ အသည်းအသန်လိုက်ဖြေရှင်းရလို့ ပါ..။
ကြားထဲက..ကာယကံရှင်နဲ့အရမ်းခင်တဲ့သူတွေခမျာ… အချောင်စိတ်တွေပူပြီး ငွေတွေပို့ ချလိုက်တတ်ပါတယ်..။
ပလုံ… ဆိုတာကမှ ..ရေထဲခဲကျရင်အသံထွက်သေး.. .။အဲလိုငွေပို့ လို့ကတော့…
ကဲ..အောက်မှာ အော်ရီဂျင်နယ်အီးမေလ်း..။ အမည်ကိုဖျက်ထားပါတယ်..။
I ‘m quite sure you are okay.Presently,i am not okay.I had an Urgent trip to Edinburg2days ago foraSeminar/Conference trip.It was an urgent Seminar/Conference trip which i couldn’t inform anyone of. I really want to confide in you and I want it to remain confidential between us .Also,i am sorry if this sound embarrassing to you,but i had no choice than to send mail to everyone on my contact list.
I’m stuck in serious mess here in UK. I was attacked on my way to the hotel I lodged yesterday, although I wasn’t hurt because I complied immediately
with their instructions.It was reallyasad experience.They stole my mobile phone,my credit cards and all the money with me were taken by them. I need to
sort out some vital issues including my bills.
Please I need financial assistance. I would like you to help me with £1600pounds or any amount you could afford. I will refund it back
immediately on my arrival.Incase you don’t have the whole money,i will appreciate any smaller amount also. I am sending this email with great shock.The easiest way for you to send the money to me now is via WESTERN UNION MONEY TRANSFER.Kindly go straight to any western union outlet close to you and make the transfer.This is an urgent help needed.I will appreciate your urgent response to my financial aid please.Infact,you can do the transfer online as well using the western union website [www.westernunion.com].
The details below will be needed for the transfer at any western union office/outlet for fast transfer.
Address: 79 Lauriston Place,Edinburgh, City of Edinburgh EH3 9, United Kingdom
You will have to email me the money transfer control number [MTCN],The sender full name,The exact amount sent on the receipt after the transfer.
အဲဒီမေးလ်နဲ့ တစ်ပုံစံထဲ တစ်ခါရဖူးတယ် … ပို့တဲ့သူကလဲ အသိမေးလ်ဖြစ်နေတယ် … အမေရိကန်မှာနေတဲ့ အသိတရုတ်တစ်ယောက်ပဲ .. တကယ်မှတ်ပြီး စိတ်မကောင်းကြောင်း စာပြန်လိုက်သေးတယ် … ပိုက်ဆံကတော့ မပို့ဘူးလေ .. ကိုယ်တိုင်လဲ ရှိမှမရှိတာ
အခုဆို သူများနာမည်နဲ့ ပိ့လို့ရတဲ့ နည်းတွေ ရှိနေပါပြီ။
တို့ကိုလှမ်းတောင်းတဲ့သူကတော့ … ထိုင်ငိုရမှာပဲ ။ စိတ်တော့ရှိပေမဲ့ ပေးစရာအပိုကိုမရှိတာ ။
အဲဒီလိုနဲ့ သနားပြီး ..၁၀-၂၀ ၀ိုင်းပေးလိုက်တာ…တင်..သောင်းဂဏန်းဖြစ်သွားသတဲ့..။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတဲ့ အသိတယောက်တကယ်မှတ်ပြီး ..တောင်းတဲ့ငွေအပြည့်ကို ပေးလိုက်တယ်..။
အခုအီးမေးလ်ပို့ လာတဲ့ ပိုင်ရှင်က .. ရေဒီယိုမှာ နေရာကြီးကြီးလုပ်နေတဲ့ .. မြန်မာတယောက်ပဲ..။
အီးမေးလ်ထဲ..ယူဆာလစ်စ်မရှိဖူးဆို .. ထောင်ဂဏန်းပဲ..။